पु’र्व डिआईजी रमेश खरेलको प्र’धानमन्त्री ओली लाई खु’ल्ला पत्र! शेयर गरौं । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पु’र्व डिआईजी रमेश खरेलको प्र’धानमन्त्री ओली लाई खु’ल्ला पत्र! शेयर गरौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, अहिले सामाजिक संजालमा एउटा नाङ्गो मानिसलाई प्रहरीले बजार घुमाएको तस्बिर भाइरल भइरहेकोछ । शायद यो दृश्य तपाइलेपनि हेर्नु भएको होला वा सल्लाहकारहरूले यस बारे ब्रिफिङ् गरेका हुन सक्छन्। यो तस्बिर एक तन्नेरी नेपालीको हो जो स्वदेशको भो’कमरी छल्न विदेशमा रोजगारीका लागि गएका थिए तर कोरोना महाव्याधिका का’रण बेरोजगार बन्न पुगेपछि उनले मातृभूमि फर्किने निधो गरे। अनायासै गुमेको नोकरी र अप्रत्यासित लकडाउन (ब’न्दाबन्दी) पछि म’रिने वा बाचिने दोसाधमा उनी अनेक दुख कष्ट सहदै नेपाल भारत सीमा (धार्चुला) सम्म आइपुग्छन्। तर, सीमामा मातृभूमि उनका निम्ति स्वागतको हात फैलाइरहेको हुँदैन।
स्वदेश छिर्ने नाका सिल मात्र नभई शस्त्र सज्जित सुरक्षाकर्मी उनी र उनीजस्ता स्वदेश छिर्न खो’जिरहेकालाई देशको सरहद भन्दा बाहिरै रोक्छन्। ‘मरता क्या नही करता’ भने जसरी उनी मातृभूमिको न्यानो अँगालोमा पुग्न चीसो र तीब्र बहावको महाकाली नदीमा हाम फाल्छन् र वेगसंग पौठेजोरी खेल्दै नेपाली किनार भेट्छन्। तर नदी पार गर्न सफल उनी दु:ख भने पार गर्न सक्दैनन्।
तावावाट भुङ्ग्रोमा’ भने जसरी उनी सीमा सुरक्षा निम्ति तैनाथ सुरक्षाकर्मीको फ’न्दामा पर्छन्, स्वेदश प्रवेश गरेको कसुरमा। निर्वस्त्र उनलाई कब्जामा लिइन्छ र बजार घुमाइन्छ। त्यस पछि उनले के भोगे, त्यो रामजाने। वे’चैनी र विचल्लीमा परेका हजारौं नेपाली तन्नेरीमध्येका उनी एक प्रतिनिधि पात्र हुन्।
जसको पसिनाको क’माइलाई यस मुलुकले ‘रेमिट्यान्स’ भन्दै कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा दर्ज गर्छ। तर, ती योगदानकर्ता स्वयं जब विदेशी भूमिमा बि’खलबन्दमा प’र्छन्, स्वदेशको ढोका उ’नीहरूका लागि बन्द हुन्छ। हो, कोरोना संक्रामक रोग हो र यसै जो कोहीलाई निर्वाध प्रवेश दिइन सकिन्न। तर कुनै व्यक्ति कोरोना संक्रमित छ-छैन भन्ने परिक्षणका पनि त विधि छन् नि!
शं’का लागेका त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वा’रेन्टिनमा राख्न सकिन्छ। यो कुनै पनि राज्यका लागि असंभव कार्य होइन। यदि हवाइमार्गबाट फर्किएकालाई सरकार नि:शुल्क क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सक्छ भने स्थलमार्गवाट फर्किएका निम्ति कि’न भेद’भाव गर्छ?
‘समाजवादउन्मुख’ मुलु’कका निम्ति हवाइ मार्गवाट र स्थलमार्ग भि’त्रिनेको मूल्य फरक हुन्छ हो? चीनको वुहानमा कोरोनाको सं’क्रमण फैलिइरहदा ढिलै भए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प’ठाएर उध्दार गरिएको कार्यको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो। तर, भा’रतवाट स्वदेश फिर्न खोज्नेका निम्ति किन स्वा’गत नभएर ड’ण्डा वर्साइन्छ?
आज संसारका सबै मुलुक अन्य देशमा फसेका आफ्ना नागरिकको उध्दारमा सबै प्रतिकूलताका विपरित जुटेका छन्। अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आदि देशले हाम्रो मुलुकका कुना कन्दरामा फसेका आफ्ना नागरिकको खो’जपडताल गरी चा’र्टेड विमानद्वारा दिनहुँ उध्दार गर्दै आएका छन्। तर अनेकौं व्यवधान सहदै र खुट्टामा ठेला उब्जाउदै आफ्नै मातृभूमिको दैलोसम्म आएका हामी भने आफ्नै दाजुभाइलाई किन सरहदपारी राख्दै छौं?
किन निर्मम ला’ठी वर्सा’उदै छौं? कहाँ हरायो हाम्रो मानवीयता र कहाँ विलुप्त भयो तपाई नेतृत्वको सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायिता? संकटमा नागरिक स’रकारलाई त्यसरी नै हेरिरहेका हुन्छन्, जसरी भोको अनि थकित वालक आफ्ना आभिभावकतिर हेर्दछ। अनेकौं दु:ख र हण्डर खाएर घरको दैलोमा उभिएको सन्तानका निम्ति ढोकाको गजवार नखोल्ने कस्ता निष्ठुरी अभिभावक होलान्?
यसको ज’वाफ मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा तपाईले दिनुपर्छ। के कर र रेमिट्यान्स अनि नेतालाई भोट वटुल्न मात्र जनता चाहिने हुन्?कोरोनाका कारण सीमामा अलपत्र परेकाहरु अब कता जाने ? भारतवाट नेपालतिर मात्र नभएर नेपालवाट भारत प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय समेत सीमा सि’लबन्दीका कारण विखबन्दमा छन्।
नेपाल-भारतवीच विशिष्ट तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहदै आएको छ। विपतका बेला एक देशका सरकारले अर्का देशका नागरिकको मद्दत गर्न सक्छन्। तर, सी’मामा नागरिक विचल्लीमा पर्नु भनेको असलमा यी दुई देश वीचको कू’टनीतिक असफलता पनि हो।
अयोध्यावाट जन्ती लि’एर आएका समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुरमा स्वागत गर्ने तपाई एक-आपसमा फोनवार्ता मार्फत यस अन्यौल किन हल गर्नुहुन्न? सीमा छेउछाउका विद्यालय, गोदाम, सरकारी भवन र त्यतिसम्म पनि उपलब्ध नभए टेन्ट निर्मित क्वारेन्टिनमा राखेर आफ्ना असहाय नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व किन निर्वाह गर्नु हुन्न?हामीलाई थाहा छ, तपाई मिर्गौला प्र’त्यारोपणका का’रण स्वास्थलाभ गरिरहनु भएको छ। शायद, आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा तपाईलाई कोरोनाआक्रान्त आफ्ना मु’लुकका नागरिकको स्वास्थ्यको बढी चिन्ता होला। हाम्रो आशा छ, सीमामा रोगसंगै भोकसंग जुधिरहेका असहाय नेपाली दा’जुभाइको क्रन्दन पनि तपाई समक्ष पुग्नेछ र उनीहरूका निम्ति मातृभूमिको ढोका अ’विलम्ब खुल्ने छ।
Previous भारतमा को’रोना सं’क्रमण बढ्दै गएपछि ने’पालमा पा’हुना लाग्न आउनेको ल’र्को!
Next देशका सच्चा ना’यक डा. म’हाविर पुनलाई सबैले साथ दि’औं : रमा ओली